Noho Ianao Mahavita ... | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 31, 2008 Talata, Septambra 4, 2012 Douglas Karr
Taona vitsivitsy lasa izay, rehefa nidona tamin'ny tsena ny Bluetooth, dia nisy buzz teo amin'ny sehatry ny dokambarotra. Hahafinaritra tokoa ny manao doka mitsambikina amin'ny telefaoninao, rehefa eo akaikin'ny vokatra, serivisy na orinasa ianao? Afaka mahita ny mpanao dokambarotra mitsotra rano aho izao!
Sary hitako io Tranokalan'ny Portfolio izany no manazava ny fizotrany.
Rehefa misy olona tonga ao akaikin'ny toerana misy ny dokam-barotra, ny telefaona finday manana alàlan'ny Bluetooth dia mamela hafatra ho an'ny doka.
Tsy mahagaga raha ny mpanao dokam-barotra no manararaotra izany - manana ny efatra P ianao amin'ny marketing iray: vokatra, vidiny, fampiroboroboana ary toerana! RNH, tsy mahita ilay marketing 'P' vaovao sy manan-danja indrindra ianao, na dia… Fahazoan-dàlana!
Ny isan'ny dokam-barotra hitan'ny Amerikanina antonony isan'andro dia nipoaka tampoka Hafatra 3,000 isan'andro. Betsaka tokoa, raha ny marina, nampiditra verbiage tao amin'ny rakibolanay izahay ho an'ny fandefasana hafatra tsy nirina - natomboka tamin'ny mailaka ary neken'ny besinimaro ho toy ny dokam-barotra manahirana rehetra - SPAM.
Marary sy reraky ny Amerikanina. Noterenay ny governemantanay hanao zavatra momba izany, tamin'ny famoronana ny Aza miantso ny rezistra ary ny CAN-Spam Mihetsika mailaka tsy ilaina. Ny fihetsika CAN-SPAM, mampihomehy dia vita tsotra izao mora kokoa ny spamming avy amin'ny spammers ary henjana kokoa amin'ireo mailaka miorina amin'ny alàlana.
Atsaharo ny fandefasana mailaka amiko! Aza miantso ahy intsony rehefa hisakafo hariva! Mijanòna! Raha tadiaviko ny vokatrao na ny serivisinao dia ho hitako ianao! Hijery anao amin'ny Internet aho. Hanontany ny namako aho ho an'ny tolo-kevitra. Hamaky lahatsoratra momba anao aho.
Ny marketing marketing dia efa nivoatra. Michael Katz dia nanoratra ity fehezanteny ity, Adverjacking, mamaritra ny fampiharana ny fifaninanana mahavoa anao amin'ny hafatra fifaninanana raha eo akaikin'ny fifaninanana ianao. Ouh! Alao an-tsaina ny fividianana fiara sy ny fahazoana hafatra amin'ny alàlan'ny Bluetooth avy amin'ny mpivarotra eo akaikinao milaza aminao mba hanantona eo noho eo $ 500!
Ny dokam-barotra dia toy ny virus (amin'ny fomba maro noho ny iray!). Rehefa iharan'ny virus iray hatrany ny mpanjifa dia mitombo hatrany ny fahafahan'izy ireo manohitra an'io viriosy io mandra-pahamarin'izy ireo azy amin'ny farany. Rehefa mihombo ny dokam-barotra, dia vao mainka mahatohitra azy ireo ny mpanjifa. Tohizo hatrany ny teknika fanaovana dokam-barotra manelingelina kokoa ary handratra anao sy ny indostria ianao.
Fa maninona no ny olona no hanao an'izany? Satria mandeha izy! Ho an'ny olona 1,000 izay azonao andefasana ny hafatra 500 $, 5 no mety hamaly. Ny ROI amin'izany noho ny fanosehana tsotra fotsiny hafatra Bluetooth dia an'arivony isan-jato. Ary ireo olona tena tezitra dia tsy hividy aminao na iza na iza, ka iza no miraharaha?
Ny olana dia ity dia ny marketing tsy fahita lavitra aorian'ny valiny eo no ho eo nefa tsy misy paikady maharitra. Sarotra ny refesina ny fahavoazana ataonao satria tsy misy vokany afa-tsy ny vokany lavitra any an-dàlana. Amin'izay fotoana izay, ny VP an'ny Marketing na ny doka dia mety lasa efa ela ka hitsentsitra ny orinasany manaraka.
Ny fehiny dia raha tsy manome ny 'P' fahadimy ianao - Fahazoan-dàlana - manintona anao, dia mora kokoa ny manimba zavatra lehibe amin'ny varotra maharitra ataonao. Raha atao teny hafa, satria afaka mampiasa teknolojia fanosehana toa izao ianao dia tsy midika izany fa tokony.
Hivoaka mihitsy aza aho ary hilaza fa ity no karazana doka izay nivoatra avy amin'ny haitao, fa tsy ny mifamadika amin'izany. Ireo mpanorina ny Bluetooth dia tsy nipetraka iray andro teo ary nilaza hoe: “Ralehilahy, enga anie mba misy fomba ahafahantsika manosika dokam-barotra amin'ny finday rehefa mandalo ilay olona!”.
Tags: adverjackingBluetoothmarketing amin'ny Bluetoothakaiky Bluetoothmarketing amin'ny akaiky an'i Bluetoothmarketing eo akaiky
Mitady Visio… aka… Manontany tena ny olona Fa maninona aho amin'ny Mac
Raiso Knotice! Mampifandray ireo banga amin'ny haitao marketing
Mar 31, 2008 ao amin'ny 9: PM PM
Io dia ohatra iray mahazatra ihany amin'ny fomba andanian'ny ankamaroan'ny olona fotoana bebe kokoa mieritreritra ny fomba ahafahany mamoaka lanja noho ny pie efa misy ary voaozona amin'ny olon-kafa, fa tsy ny fomba ahafahan'izy ireo mampiditra sanda miorina amin'ny tena tadiavin'ny sasany.
Nanao izany hatrany ny olona fa tamin'ny andro talohan'ny Internet nifandray hatrany dia tsy dia mazava loatra. Ankehitriny satria kely dia kely ny vidiny amin'ny fametrahana ny faniriana hamoaka lanja amin'ny olona marobe toy izany dia tonga amin'ny fotoana iray isika, raha tsy miova ny raharaha. isika rehetra dia ho tratry ny adin-tsaina tsy an-kijanona ary tototry ny zava-drehetra ka hirodana amin'ny fomba izay tsy azontsika an-tsaina akory.
OTOH, ary eto no antenaiko fa manomboka mahatsapa ny olona fa tsy manome lanja karma tsara azy ireo akory ny lanja mampiditra azy ireo, fa hahatonga azy ireo hiverina tsara kokoa koa mandritra ny fotoana maharitra. Ho tonga amin'ny fahazavana toy izany ve ny olona? Ny fotoana ihany no hilaza…
BTW, nanao fivoriana aho tamin'ny Manararaotra ny tranokala finday at Mpandraharaha amin'ny Internet Atlanta ary ny marimaritra iraisan'ny mpanatrika mikasika ny dokam-barotra momba ny fanentanana dia tena “Tsy ianao koa ve mieritreritra momba izany, na hiafara amin'ny fandefasana rosiana ny findaiko lavitra aho, any amin'ny toerana somary tianao kokoa ny tsy izy.”Na zavatra toa izany. 😉
Marketing amin'ny lbug
Apr 1, 2008 ao amin'ny 6: PM PM
Ny karazana tetika marketing izay manome antoka anao hanilika ampahany lehibe amin'ny tsenanao kendrena ampy hametrahana ny tenanao hiala amin'ny asa aman-draharaha.
Apr 2, 2008 amin'ny 8: 37 AM
Amin'ny maha mailer direct ahy, matetika aho no nanontaniana raha nisy nanimba ny mailaka mivantana ny zavatra toy ny mailaka, ary ny fandefasana hafatra ankehitriny. Tsy nisy? Raha misy izany dia mampalaza azy io kokoa, satria maro ny olona no mbola tia mandray fampahalalana vaovao sy faktiora amin'ny alàlan'ny paositra fa tsy mailaka.
Saingy, tsy fahita firy isika amin'ny indostrian'ny mailaka mivantana, satria mamporisika ny olona hampihena ny habetsaky ny mailaka mivantana alefany izahay. Tsy tiako ny olona mandefa bebe kokoa amin'ny olona maro izay tsy te-hahazo izany; Tiako izy ireo handefa kely kokoa any amin'ireo olona mora vidy kokoa, liana bebe kokoa mihaino azy ireo, ary tsy dia mametraka ny valopy raha tsy mijery azy.
Nanoratra koa aho fa aza miantso lisitra ny bilaogiko manokana
Apr 2, 2008 ao amin'ny 1: PM PM
Somary gaga aho amin'ny toa fahitana lavitra an'ity lahatsoratra ity sy ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra. Tsia, ny olona tsara ao amin'ny Bluetooth dia tsy nipetraka nanandrana namorona fomba hafa amin'ny doka rehefa namorona ny vokariny. Fa avy eo indray azoko antoka fa ireo mpanamboatra fahitalavitra sy radio dia tsy nanandrana nanao an'izany koa. Na izany aza, am-polony taona maro taty aoriana, dia fitaovana fampahalalam-baovao eken'ny besinimaro io.
Raha tena mieritreritra momba azy ianao, ny marketing marketing dia alalana kokoa noho ny TV, radio, ary pirinty. Tsy manana safidy matetika ianao amin'ny fijerena doka amin'ny haino aman-jery lehibe, fa ny fitaovana Bluetooth tokana rehetra any dia hanery anao hahazo fankatoavana alohan'ny handraisanao atiny rehetra (araka ny navoitran'ilay fanoharana mazava tsara) Ary ahoana raha tsy te hamporisihina mihitsy ianao? Great! Atsaharo fotsiny ny Bluetooth amin'ny fitaovanao, na apetaho amin'ny? Tsy hita maso? fomba.
Fantatsika rehetra izao fa ny haino aman-jery lehibe dia indostria marary sy / na efa ho faty, ary manaiky aho fa ny fanombananao ny fanaovana doka dia toy ny viriosy. Marary ny olona raha mahita hafatra tsy misy dikany avy amin'ireo orinasa tsy tian'izy ireo? ary amin'ny findaiko izao? Manafintohina! Fa ho aiza kosa isika raha avelantsika hamono ny vaovao ireo hevitra taloha? Mazava ho azy fa tsy mila doka nentim-paharazana amin'ny finday isika. Izany dia mety hanao an'ity medium vaovao ity izay nataony tamin'ireo taloha. Fa raha nandefa ringtone, advergame, na screensaver mangatsiaka aho? pssh azo antoka, afatory aho. Izay no ampahany lehibe indrindra amin'ireo teknolojia vaovao ireo: ny safidin'ny atiny dia tsy misy fetra. Araka ny nomarihin'i Mike Schinkel, ireo indostria ireo dia mila ampianarina fotsiny amin'ny fomba fampidirana sanda. Raha tadidin'ny mpivarotra izany ary zarao ny atiny mahaliana sy mifanakalo, tsy ny coupon 10% fotsiny ho an'ny Starbucks, dia manao ny asany izy ireo. Raha tazonina ho mahaliana sy mahaliana ny zavatra, heveriko fa hanampy ny orinasany sy ny orinasany izy ireo fa tsy handratra azy.
Aug 21, 2008 amin'ny 10: 39 AM
Salama, vao avy nampiasa AreaBlu Bluetooth Light aho ary nanana fahatsapana tsara momba ilay rindrambaiko. Mampiasa ny vesion-na demo aho nefa mieritreritra ny hividy ilay fahazoan-dàlana $ 99.
Izy ireo koa dia nanome ahy tapakila fihenam-bidy 25% ho an'ny Google checkout? Blue4less?
Ho fampahalalana bebe kokoa dia ny tranokalan'izy ireo http://www.areabluetooth.com/en/
18 Jan 2009 amin'ny 12:56 PM
Izaho dia namorona lahatsoratra momba ny 6 'P's ao amin'ny marketing akaiky an'i Bluetooth izay voakasik'ity lahatsoratra ity ihany. Mahatsiaro aho fa ny permssion dia saika raisina amin'ny famakiana fa mila manatanteraka fampielezan-kevitra tsara ianao ary mifanaraka amin'ny fomba fanao tsara indrindra.
Avy amin'ny zavatra niainako no nahitako fa mampanantena ilay 'P' manan-danja indrindra amin'ny fampielezan-kevitra proxy. Nomeko tarehimarika vitsivitsy hanehoana an'io.